#Sergio Aguero ayaa seddex jeer shabaqa soo taabtay kulankii Manchester City | Get Latest News From Horn of Africa
#Sergio Aguero ayaa seddex jeer shabaqa soo taabtay kulankii Manchester City
Gool dhaliyaha xulka qaranka Argentina iyo kooxda Manchester City ee Sergio Aguero ayaa kulankii labaad oo xidhiidh ah ee uu kooxdiisa Sky Blues uga soo muuqday Etihad Stadium waxa uu dhaliyay saddexleydiisii labaad ee saddexdii kulan ee Premier league ugu danbeeyay isaga oo Chelsea mariyay dariiqii uu hore Arsenal u soo tusay.
Sergio Aguero ayaa xog cajiib ah looga diwaan galiyay kulankii Chelsea isaga oo magiciisa si buuxda ugu qoray taariikhda horyalka Premier league isla markaana jabiyay rekoodhkii uu Alan Shearer waqtiga dheer ku haystay xidiga saddexleyda ugu badan ka soo dhaliyay Premier League.
Sergio Aguero ayaa laba kulan oo xidhiidh ah oo Premier league ay Manchester City ku soo ciyaartay Etihad Stadium waxa uu min saddexley goolal ah ka soo dhaliyay kooxaha Arsenal iyo Cheslea si uu gool dhalintiisa Premier league heer kale ugu qaado.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo koobaynaa waxyabihii Sergio Aguero looga diwaan galiyay kulankii ay Man City sida xun ugu gumaaday Chelsea ee Etihad Stadium.
1- Sergio Aguero ayaa ugu horayn barbareeyay rekoodhkii taariikhiga ahaa ee uu Alan Shearer ku soo haysta xidiga taariikhda Premier league saddexleyda ugu badan soo dhaliyay waxayna hadda Aguero iyo Alan Shearer wada leeyihiin min 11 saddexley waqti kaliya ayaana inaga xiga maalinta uu Aguero rekoodhkan la wareegi doono.
2- Mar labaad Sergio Aguero ayaa jabiyay rekoodh uu hierry Henry ku soo dhigay garoonkii hore ee Arsenal ee Highbury kaas oo 8 saddexley ku haysta xidiga hal garoon saddexleyda ugu badan Premeir league kaga soo dhaliyay laakiin Aguero ayaa 9 saddexley ku dhaliyay Etihad Stadium si uu rekoodhkani khaas isaga ugu noqdo.
4- Sergio Aguero ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee laba kulan oo xidhiidh ah oo garoonka kooxdiisa ah saddexley ka dhaliyay tan iyo August 2010 kii markaas oo uu Didier Drogba ahaa xidigii ugu danbeeyay ee shaqadan oo kale soo qabtay laakiin waxa uu Aguero noqday xidigii shanaad ee laba kulan oo garoonka kooxdiisa ah saddexleyo xidhiidh ah ku dhaliyay.
5- Sergio Aguero ayaa noqday xidigii lixaad oo kaliye ee taariikhda Premier league ee ku soo lug yeeshay 200 gool oo Premier league ah waxaana ka horeeyay oo xogtan oo kale gaadhay Wayne Rooney (Man Utd), Ryan Giggs (Man Utd), Thierry Henry (Arsenal), Frank Lampard (Chelsea) iyo Steven Gerrard (Liverpool).
6- Sergio Aguero ayaa sanadkan 2019 soo dhaliyay 8 gool waana goolal ka badan intii ay Chelsea sanadkan cusub ee 2019 ay ka soo dhaliyeen Premier league iyada oo Blues soo dhalisay 7 gool oo kaliya waxaana dhamaan ka sare maray Sergio Aguero.
Apr 24, 2019 98,239
Apr 24, 2019 19,650